လှူဒါန်းခြင်း3နှစ်ပေါင်း5months ago #25
သင်ကအလှူငွေများအတွက်အကြွေး OR ATM စက်များကဒ်များကိုလက်ခံပါသလား
ငါကိုသင် USPS မေးလ်ကနေတဆင့်တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုပေးပို့ရမညျတူသောကျွန်မနားလည်သဘောပေါက်နေပါတယ်အဘယျသို့ကနေ, ကကြည့်ရှုသည်။ ငါမှန်လား?
လှူဒါန်းခြင်း3နှစ်ပေါင်း5months ago #26
ယခုတွင်ငါသည်လွယ်ကူ installed, KLAX ရှိသည်! SOoooooo သင်ဟာအခြား FAN များ !!!!
လှူဒါန်းခြင်း3နှစ်ပေါင်း5months ago #28
သင်တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုစေလိုပါကသင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ကိုသုံးနိုငျ http://www.rikoooo.com/more/donate
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: Gh0stRider203, hedupitsbutt
လှူဒါန်းခြင်း3နှစ်ပေါင်း5months ago #80
hedupitsbutt wrote: အခုကလွယ်ကူ installed, KLAX ရှိသည်! SOoooooo သင်ဟာအခြား FAN များ !!!!
သငျသညျ hehe ...... ငါ့ကိုများကဲ့သို့ Rikoooo စှဲလမျးသူတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ,
လှူဒါန်းခြင်း3နှစ်ပေါင်း4months ago #173
ကျွန်တော်တို့အဘိဓါန် Chuka ရဲ့တူသည့်စနစ်ရှိသည်ဖို့ superskullmaster ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် ??? ^ _ ^ (သူပြီးသားသူတဦးတည်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုဆိုသည်။ ငါသိပ်ကြောင့်တူသောသူတဦးရှိသည်ဖို့သည်အခြားပေးပါလိမ့်မယ်အရမ်းရယ်ရတယ်)
0.233 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်